ADD को साथ किशोरका लागि ADHD औषधि को लाभ - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण भारी खेल समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस कम्पनी, चेकआउट समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु
मुख्य >> औषधि जानकारी >> किशोरका लागि एडीएचडी औषधिको फाइदाहरू
किशोरका लागि एडीएचडी औषधिको फाइदाहरू
११% अमेरिकी बच्चाहरूको 4-१-17 वर्षको निदानध्यान घाटा hyperactivity विकार (एडीएचडी ), तिनीहरू मध्ये लगभग %०% ले उनीहरूका लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न औषधी लिइरहेका छन्। धेरै व्यक्तिहरूले एडीएचडीलाई एकको रूपमा सोच्दछन् बाल्यकाल अवस्था , तर यस अवस्थाको साथ बच्चाहरूको लगभग %०% ले किशोर र वयस्कतामा लक्षणहरू र कठिनाइहरूको अनुभव गर्न जारी राख्दछ।
हामी हाम्रो जवान छोरालाई एडीएचडी औषधिमा राख्ने हाम्रो निर्णयको बारे निश्चित थिए। तर जब उहाँ किशोरावस्थामा प्रवेश गर्नुभयो, र उनका लक्षणहरू र सम्भावित खतराहरू भिन्न थिए, हामीले पुनः मूल्यांकन गरे कि नगर्ने राख्न उसलाई औषधीमा। प्रक्रियामा, हामी यहाँ फेला परेका छौं।
किशोर किशोरीहरूमा ADHD लक्षणहरू कस्तो देखिन्छन्?
सामान्यतया ADHD सँग सम्बन्धित दृश्यात्मक hyperactivity बच्चाहरू ठूलो हुँदै जाँदा कम हुँदै जान्छ, जसले यस्तो अवस्थालाई कम गम्भीर हुँदै गएको जस्तो देखिन सक्छ। तर, किशोरावस्थामा, शैक्षिक दवाव र सामाजिक अपेक्षा बढ्छ। यो विशेष गरी एडीएचडीका साथ वयस्कहरूको लागि प्रबन्ध गर्न गाह्रो हुन सक्छ जसले अदृश्य लक्षणहरूसँग समात्दछन्, जस्तै कार्यकारी समारोह र कार्यरत मेमोरी घाटाहरू। को बाल मन संस्थान मुख्य क्षेत्रहरूको रूपरेखा बनाउँदछ जहाँ ADHD संग किशोरहरू प्रायः संघर्ष गर्दछन्।
एडीएचडीका साथ किशोरसँग प्राय: संगठित हुन र कक्षामा वा गृहकार्यमा केन्द्रित रहन समस्या हुन्छ। यसले उनीहरूको कार्य र उनीहरूको शैक्षिक सफलतामा टोल लिन सक्दछ।
ADHD को साथ किशोर किशोरीहरूको लागि साथी बनाउने र राख्न कठिन हुन सक्छ। तिनीहरूले सामाजिक संकेतहरू छुटाउन सक्छन्, आवेगमा कार्य गर्न, वा उपयुक्त संचारको साथ संघर्ष गर्न सक्दछन्। उनीहरू अधिक दमन वा अरूलाई बदमाश गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
कमजोर भावना-नियमनले किशोरावस्थाको विशिष्ट मूड स्विंगलाई अझ बढी किशोर किशोरीहरूमा ADHD सँग जोड्न सक्छ। तिनीहरू प्राय: सजिलै निराश हुन्छन् र आफ्ना भावनाहरू नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।
एडीएचडीका साथ किशोरहरूले जोखिमपूर्ण व्यवहारमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ जस्तै धूम्रपान, मदिरा, र अन्य पदार्थ प्रयोग वा दुरुपयोग, र यौन सम्बन्ध राख्नु (विशेष गरी असुरक्षित यौन)। तिनीहरू अक्सर यो neurotypical साथीहरूको भन्दा पहिले यो व्यवहार सुरू।
आवेग र बेवास्ता प्रवृत्तिले एडीएचडीको साथ किशोरलाई ट्राफिक टिकट र दुर्घटनाहरूको उच्च जोखिममा राख्छ, विशेष गरी गम्भीर दुर्घटनाहरू।
किशोर किशोरीहरूमा ADHD कसरी व्यवहार गरिन्छ?
उपयुक्त उपचारले यी जोखिमहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, र पहिले नै चुनौतीपूर्ण अवधि एडीएचडीको साथ ट्वीन्स र किशोरका लागि अलि सजिलो बनाउँछ। मेरो एडीएचडी निदान पछि मेरो then-। वर्षको छोरालाई औषधीमा राख्न निर्णय गाह्रो थिएन। हामीले अनुसन्धान गरिसकेका थियौं एडीएचडी औषधि को लाभ र सम्भावित जोखिमहरू।
हामीले उसको बाल रोग विशेषज्ञको साथ लामो छलफल गरे र हामीलाई थाहा थियो कि यो सही विकल्प हो, कुनै झिझक बिना। केही दिन भित्र, हामीले सकारात्मक परिवर्तनहरू देख्यौं, र महिनौं भित्रमा हामीले इष्टतम खुराक पाएका थियौं कन्सर्ट । ऊ स्कूलमा धेरै सजिलो समय बित्दै थियो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ऊ आफैंलाई राम्रो लाग्यो। उनको कथा अनौंठो छ।
Xanax को सामान्य रूप के हो
औषधि किशोरावस्थामा ADHD प्रबन्ध गर्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र विश्वसनीय तरीका हो। त्यहाँ धेरै (औषधिहरू) छन्, मनोविज्ञान मा प्राध्यापक डा जोसेफ Shrand भन्छन् हार्वर्ड मेडिकल स्कूल र को संस्थापक ड्रग स्टोरी थियेटर , तर मूलतः उत्तेजकका दुई मुख्य कोटीहरू: methylphenidates ( Ritalin , कन्सर्ट , फोकलिन , आदि) र एम्फेटामाइन व्युत्पन्न Adderall , Vyvanse , आदि)। यी औषधीहरूले एडीएचडीको साथ किशोरलाई शान्त गर्दछ, तर एडीएचडी नरहेका मानिसहरूलाई पुन: प्रभाव पार्दछ। डा। श्रान्डले उल्लेख गरे कि त्यहाँ अन्य औषधीहरू पनि छन् जुन मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै उत्तेजक Dexedrine र गैर उत्तेजक Strattera ।
नियमित व्यायाम एडीएचडीको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी गैर-औषधीय उपचार हो, भन्छ टिया केन्ट्रेल , उत्तरी क्यारोलिनामा चिकित्सक र एडीएचडी विशेषज्ञ। धेरै व्यक्तिहरूलाई अझै पनि औषधी हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ तर व्यायामले औषधि प्रभावकारितामा 'खाली' सुधार गर्न सक्दछ, उदाहरणका लागि, खुराकको बीचमा वा जब तपाईंको किशोर किशोरीहरू पहिलो उठ्छन्।
क्यान्ट्रेलले ADHD को साथ किशोरहरूमा लक्षणहरू ब्यबश्थापनको लागी सुत रातीको निद्राको महत्त्वमा जोड दिए। जबकि राम्रो रातको आरामले तपाईंको एडीएचडी लक्षणहरू निको पार्दैन, यसले तपाईंको अन्य एडीएचडी रणनीतिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ।
आहार असहिष्णुताहरूको लागि स्क्रीनिंग
अन-व्यवस्थित ग्लूटेन असहिष्णुता र सेलिआक रोगले ADHD लक्षणहरूको नक्कल गर्न सक्छ। क्यान्ट्रेल जोड दिन्छन् कि हालको अनुसन्धानले ग्लुटन-रहित आहार र एडीएचडी व्यवस्थापनको बीचको सम्बन्धलाई समर्थन गर्दैन, तर त्यो,… बच्चा र किशोर किशोरीहरू जसको एडीएचडी लक्षणहरू ग्लूटेन-फ्रि डाईटमा सुधार भएका थिए तिनीहरूलाई पत्ता लगाइएको सेलिआक रोग वा गैर-सिलियाक भेटियो। ग्लूटेन संवेदनशीलता। यो प्रति सेप उपचार होइन, तर यो तपाईंको बच्चाको डाक्टरको साथ ल्याउन लायक छ।
किशोरका लागि एडीएचडी औषधिका फाइदाहरू के हुन्?
डा। श्रान्ड भन्छन् कि उचित उपचारका बच्चाहरुले कुनै पनि किशोर अनुहार भन्दा कम वा कम चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। तर उचित रूपमा उपचार गरिने बच्चाहरू पदार्थको प्रयोगको लागि उच्च जोखिममा हुन्छन्, स्कूल छोड्छ, र लगातार अपर्याप्त महसुस गर्दछ।
क्यान्ट्रेल सहमत छन्: धेरै जोखिमहरू कम हुन्छन् जब किशोरलाई एडीएचडीको लागि उचित औषधी दिइन्छ। तिनीहरू गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ; कुनै पनि प्रकारको पदार्थको आदी हुन कम सम्भावना; आफैंलाई हानी गर्ने, आत्महत्या गर्ने वा जेलमा अन्त हुने सम्भावना कम हुन्छ।
दुबै क्यान्ट्रेल र डा। श्रान्डले किशोर किशोरीहरूलाई औषधि राख्न सल्लाह दिन्छन् यदि उनीहरू एडीएचडी लक्षणसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। डा। श्रान्डले कुनै महत्त्वपूर्ण जोखिम बोक्न एडीएचडी औषधिमा रहन ठान्दैनन्। तर यदि किशोर-किशोरीहरू उनीहरूले औषधीविना नै पाउन सकिन्छ कि भनेर जान्न चाहन्छन् भने, उनी कहिलेकाँही औषधी ब्रेक लिन सुझाव दिन्छन्, विशेष गरी स्कूल बिदाको बेला। उत्तेजकहरूले द्रुत रूपमा शरीर छोड्छ, त्यसैले किशोरकिशोरीहरूले कस्तो महसुस गर्छन् भनेर मूल्या assess्कन गर्न धेरै समय लाग्दैन, जब बिरामीको अफिस बनाउँदा उनीहरू कसरी महसुस गर्छन्।
डा। श्रान्ड सल्लाह दिन्छन् वयस्कतामा जारी औषधी जारी राख्न यदि यसले सहयोग गरिरहेको छ। मसँग वयस्क बिरामीहरू छन् जसलाई बच्चाको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ, तर कहिले पनि थिएन, औषधी सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो जीवन वरिपरि परिवर्तन गर्नुहोस्। क्यान्ट्रेलले व्यक्तिगत रूपमा यो अनुभव गरे ।
हाम्रो परिवारको लागि, एडीएचडी औषधि को फाइदा जोखिम भन्दा बढी छ। हामीले गर्ने निर्णय गर्यौं हाम्रो छोरालाई उसको औषधीमा राख्नुहोस् जब सम्म उसलाई यसको आवश्यकता पर्दछ, वा जबसम्म उहाँ भिन्न छनौट गर्न पर्याप्त उमेर नभएसम्म। हामी चिकित्सा कलंकलाई चुनौती दिन खुशी छौं।
एडीएचडीले बच्चालाई आफ्नो सम्भाव्यताको अनुरुप बाँच्नको लागि आवश्यक स्तरको खेल मैदान दिने औषधिले एडीएचडी औषधिलाई बच्चालाई एउटा झोला दिनको लागि तुलना गर्छ जुन आफ्नो ओभर-स्पिबल मार्बलहरू राख्छ।
डा। श्रान्डले एडीएचडी औषधिलाई पर्वतारोहण उपकरणसँग तुलना गरे। म एउटा बच्चालाई यो सोध्छु: यदि तपाईंसँग पर्वत चढ्नको लागि छ भने तपाईं आफ्नो ना bare्गो खुट्टामा यो गर्न लाग्नुहुन्छ? यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईंको पहाड चढ्न तपाईंलाई सहि उपकरणहरू चाहिन्छ। र मलाई कति उपकरणहरू चाहिन्छ भनेर मतलब छैन।
हामीले हाम्रो छोरालाई भनेका थियौं कि उसको लागि एडीएचडी औषधी सेवन गर्नु भनेको चश्मा लगाउनु जस्तै हो - जसलाई संसार स्पष्ट पार्न र नेभिगेट गर्न सजिलो बनाउन कसै-कसैलाई चाहिन्छ। हामी आभारी छौं कि सहयोग यहाँ छ।
के मस्तिष्क-प्रशिक्षण अनुप्रयोगहरूले वास्तवमै काम गर्दछन्?
नि: शुल्क रक्त शर्करा मीटर र परीक्षण स्ट्रिप्स
कसरी एक कान संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
मधुमेह रोगीहरु मा कम रक्त शर्करा को लक्षण
एजिथ्रोमाइसिन लिने कति समय पछि म रक्सी पिउन सक्छु
कसरी घर मा भित्री कान तरल पदार्थ निकाल्ने